စိန်လက်ကောက် - Forever Gems
0 item(s) - Ks. 0
Ks.0Total
Save your time, Save your money @ Digital Economy Era.
စိန်နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ ဆွဲသီး၊များ
စိန်နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာ နားဆွဲ၊ နားကပ်များ
3D ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်း စိန်ထည်လက်ဝတ်ရတနာများ
အမျိုးသားဝတ် 3D စိန်လက်စွပ်
အမျိုးသမီးဝတ် 3D စိန်လက်စွပ်
3D စိန်နားဆွဲ၊ 3D စိန်နားကပ်
3D ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်း ရွှေဆွဲကြိုး
Sort by -- ဈေးနှုန်း အောက်ဆုံးမှသည် အရင်ဆုံး ဈေးနှုန်း အပေါ်ဆုံးမှသည် အရင်ဆုံး ထုတ်ကုန်နာမည်: A to Z ထုတ်ကုန်နာမည်: Z to A စတော့ ရှိသည်။ အညွှန်း အောက်ဆုံးမှသည် အရင်ဆုံး အညွှန်း အပေါ်ဆုံးမှသည် အရင်ဆုံး
Ks. 3,440,800 Ks. 4,301,000 ကုန်ပစ္စည်း ကုန်နေသည်။
ရတနာပစ္စည်းဝယ်ယူသူတိုင်းကို အွန်လိုင်းအရောင်းဝန်ထမ်းများမှ အမြန်ဆက်သွယ်ပြီး အသေးစိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၀ယ်ယူသူ၏လိုအပ်ချက်များအရ အော်ဒါမှာယူရမည်ဆိုပါက ရွှေဈေးအတက်အကျပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအသေးစိတ်ကိုပြန်လည်တွက်ချက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ks. 4,252,800 Ks. 5,316,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,978,400 Ks. 6,223,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,633,600 Ks. 3,292,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,985,600 Ks. 4,982,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,762,400 Ks. 4,703,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,365,600 Ks. 2,957,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,402,400 Ks. 5,503,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 1,704,000 Ks. 2,130,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,011,200 Ks. 5,014,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,400,800 Ks. 5,501,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,128,000 Ks. 2,660,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 6,256,000 Ks. 7,820,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,599,200 Ks. 5,749,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,620,800 Ks. 5,776,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,811,200 Ks. 4,764,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,849,600 Ks. 4,812,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,539,200 Ks. 3,174,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 5,133,600 Ks. 6,417,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,484,000 Ks. 3,105,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
YBG1072 (A) စိန်ပုံဆန်းလက်ကောက်
Ks. 3,192,000 Ks. 3,990,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,536,000 Ks. 4,420,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,448,800 Ks. 3,061,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 5,471,200 Ks. 6,839,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,194,400 Ks. 2,743,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,696,000 Ks. 4,620,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 3,832,800 Ks. 4,791,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
YBG2788 (A) စိန်ပုံဆန်းလက်ကောက်
Ks. 5,449,600 Ks. 6,812,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
YBG1072 (B) စိန်ပုံဆန်းလက်ကောက်
Ks. 2,467,200 Ks. 3,084,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 2,747,200 Ks. 3,434,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 4,727,200 Ks. 5,909,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
YBG2788 (B) စိန်ပုံဆန်းလက်ကောက်
Ks. 5,988,000 Ks. 7,485,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
09778808902, 09778808903, 09778808904
အွန်လိုင်းတွင် ၀ယ်ယူအားပေးခြင်းအတွက် အကူအညီလိုအပ်ပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
WELCOME TO SHWE NAN TAW
ဆိုင် (၁) အမှတ် - ၇၄၃၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် လမ်းမတော်လမ်းထောင့်၊ သံဈေးမီးပွိုင့်အနီး။
ဖုန်း - ၀၁-၂၁၀ ၅၇၂၊ ၀၁-၂၂၉ ၄၀၉၊ ၀၁-၂၂၇ ၂၁၂
ဆိုင် (၂ ) အမှတ် - ၆၈၅၊ ၁၉ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်။
ဖုန်း - ၀၁-၂၁၁ ၇၂၈၊ ၀၁-၂၂၆ ၉၇၇၊ ၀၁-၂၂၈ ၇၅၁
ဆိုင် ( ၃ ) မြေညီထပ်၊ Juction Square Shopping Center
ဖုန်း - ၀၉-၇၃၁ ၄၅၄၆၂၊ ၀၉-၇၃၁ ၄၅၄၆၃
ဆိုင် ( ၄ ) (G-05A), မြေညီထပ်၊ Myanmar Center Plaza (HAGL, Near Sedona Hotel)၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း
#201, Level 1. Junction City Yangon
Opposite of Bogyoke Market, Bogyoke Street., Pabedan Township , Yangon
Address : အမှတ် ၂၇ ဦးကျော်လှလမ်း ၊ ၇ မိုင် ၊ မ၇မ်းကုန်း
Phone : +959 778808902 - 4
&COPY; 2016 Powered by iBiz Service Provider. All Rights Reserved